5- Astaamood, oo Khayre tilmamay in hoggaanka dawlad looga baahanyahay. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/5- Astaamood, oo Khayre tilmamay in hoggaanka dawlad looga baahanyahay.
5- Astaamood, oo Khayre tilmamay in hoggaanka dawlad looga baahanyahay.
Khudbad uu bishii Jullay ka hor jeediyay boqollaal dhallin yaro ah oo ka qayb galay Shirwaynaha 3aad ee Hoggaanka, ayaa Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu sharraxay shan qodob oo miihiim u ah dawladnimda iyo dal-dhiskas ay umadda Soomaaliyeed u baahantahay.
Qodobada, oo salka ku haaya waxqabadka, dedaalka iyo hawl-karnimada looga baahanyahay hoggaanka dawladda, ayaa Ra’iisal wasaare Khayre waxa uu tilmaamay in ay udub-dhexaad u yihiin hoggaaminta iyo dawladdanimada dalkasta oo la doonaayo in uu horumar ku tallaabsado.
‘’ Dawladnimadu ayaa macanheedu, waxay tahay in aad ogtahay waxa aad Rabto. Meesha aad u socoto. sida aad u tegi lahayd . Daacad ay kaatahay . U kacdo , Wakhtina aad aag geliso’’, ayaa ku yidhi khubad soo jiidatay boqollaal kasoo qayb galay munaasibadda.
Haddaba aynnu mid mid isu dultaagno shantan qodob ee Ra’iisal wasaare khare tilmaamay in ay lagama maarmaan u yihiin dawlad-nimada.
In aad ogtahay waxa aad rabto: hoggaamiye kasta oo waddan, hay’ad ama deegaan gacanta ku haya, waxaa muhiim ah in uu ogyahay waxa uu rabo in uu ku biiriyo, kabedlo ama uu ka qabto cidda iyo meesha uu maamulayo.
Meesha aad u socoto: Waa lagama maarmaan in aad ogtahay meesha aad u socoto, ama aad u waddo waddanka aad hoggaaminaysaa si’uu horumar u gaadho.
Daacadnimo: in hoggaamiyuhu daacad u yahay dadkiisa iyo dalkiisa, ayaa keeni karta ii uu soo hooyo horumarro iyo guulo lataaban karo isla markaan waxka bedela nolosha dhaqan-dhaqaale ee bulshada uu maamulo.
In aad u kacdo ( Ficil-latimaaddo): Waxkasta oo hoggaamiyuhu niyadda ku hayo ama uu ogyahay in ay keeni karaan horumar, waxaa lagama maarmaan ah in uu kun dhaqaaqo oo waxqabad iyo ficil ubedelo.
5. In wakhti aad geliso : Hawlkasta oo muhiim ah uuna ku jiro horumarka dadka iyo dalka Soomaaliya ama dunida kaleba waxa ay u baahantahay in wakhti loo huro si guul looga gaadho.
Ugu damayn, cidkasta waxaa u cad in mudane Xasan Cali Khayre yahay hoggaamiyaha keliya ee dhaba u fahamsan kuna soo shaqeeyay, qorshe dhammaystiran oo lagu horumarin karo dalkeenna Soomaaliya oo loo baahanyahay in la gaadhsiiyo dunida kale ee horumartay.
Sanator ugu baaqay Deni iyo Madoobe in aanay la fadhiisan Farmaajo ilaa uu Ra’iisal wasaare Magcaabo.
3- arrimood oo abuuray, cabsida Deni iyo Madoobe ay ka qabaan in Farmaajo ay la fadhiistaan .
Qaramada Midoobey oo ka hadashay Shirka uu shaaciyay Madaxweyne Farmaajo
Mashruuc Xaafad loo Dalxiis tago oo laga dhisayo Magaalada Muqdisho